Raila Odinga oo sheegay in uu ka hadhay tartanka doorashada Kenya. Maxkamadduse ma ka aqbashay dalabkiisaasi? | Awdalpress.com
Raila Odinga oo sheegay in uu ka hadhay tartanka doorashada Kenya. Maxkamadduse ma ka aqbashay dalabkiisaasi?
Waxa Daabacay staff-reporter on Oct 11th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – London – Hoggaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ayaa sheegay “in Isaga iyo ku xigeenkiisa Kalonzo Musioka ay ka hadheen tartanka doorashada ee la qaban lahaa dhammaadka bishan”.
Wuxuu sheegay in dalabaadkooda aan la aqbalin ka dib go’aankii maxkamadda ee ay ku laashay doorashadii bishii August.
Guddiga doorashada ee Kenya IEBC ayaa kulan degdeg ah yeelanaya ka dib markii Raila uu ku dhawaaqay in tartanka uu ka hadhay.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo olole siyaasadeed ku jira ayaa yidhi, “dhib kuma qabno doorasho lagu noqdo. waxaan hubnaa in aan heleyno codad ka badan kuwii hore.”
Isbeheysiga Mucaaradka ee Kenya ayaa dalbaday in qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashada la badalo.
Raila Odinga ayaa sheegay in “go’aankoodu uu ahaa in doorashada ku celiska ah lagu qabto hannaanka ay maxkamadda amartay, kaas oo uu dhigayo dastuurka”.
Qoraal ay soo saareen hoggaamiyayaasha mucaaradka waxa ay sheegeen in “IEBC ay si ula kac ah uga hor timid isbeddelka muhiimka ah si loo xaqiijiyo in doorashada 26-ka bishan u noqoto mid xor iyo xalaal ah”.
Waxa ay guddiga ku eedeeyeen in uu yahay meel uu maamulo xisbiga talada haya ee Jubilee.
Shan arrimood oo udub dhaxaad u ahaa go’aanka maxkamadda sare ee Kenya
“Doorashada keli ah ee Jubilee ay aqbalayaan waa mid ay ayagu ku guuleystaan,” ayuu sheegay Raila oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa.
Waxa ay guddiga ugu baaqeen in uu joojiyo hannaanka qabashada doorasho ku celis ah, ayna billaabaan hannaan cusub oo doorasho lagu qabto.
“Waxaa cad in is beddelku uu yahay mid wax looga qabanayo qaladaadkii ka dhacay doorashii horraantii August. Waxaa taas sabab u ah in la adeegsanayo in markale doorashada soo socoto lagu shubto,” ayey sheegeen mucaaradka Kenya ee NASA.
“Is beddel la’aan doorasho ma dheceyso,” ayey ku dhawaaqeen hoggaamiyayaasha mucaaradka ka dib markii ay shirka jaraa’id dhammeeyeen.
Waxay ku dhawaaqeen dibadbax ballaaran oo beri ka dhici doono Kenya oo dhan oo ay ku dalbanayaan is bedel lagu sameeyo hannaanka iyo guddiga doorashada.
This post has been viewed 9931 times.